Hello Nepal News » मेस्सीलाई बार्सिलोनाका अध्यक्षले धोका दिए !
मेस्सीलाई बार्सिलोनाका अध्यक्षले धोका दिए !
टिमका कप्तान लिओनल मेस्सीले माग गर्नुअघि स्पेनिस बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउ पूर्वखेलाडी नेइमारलाई पुनः फर्काउने पक्षमा कहिल्यै पनि थिएनन् । तर, जब मेस्सीले क्लबसँग मेस्सीलाई फर्काउन माग गरे, बार्टोमेउ पनि राजी भए ।
तर, घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा मेस्सी अहिले क्लबका अध्यक्षबाट आफूलाई ‘धोका भएको’ अनुभूत गरिरहेका छन् । त्यो कसरी भने, बार्टोमेउले नेइमारलाई फर्काउन सबैखाले प्रयास गर्ने भन्दै मेस्सीलाई विश्वास दिलाएका थिए । तर, अहिले आएर मेस्सी व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको निचोडमा पुगेका छन् ।
त्यत्ति मात्रै हैन, बार्सिलोनाले पिएसजीसँग बाहिर चर्चा भएभन्दा निकै कमको मात्रै अफर गरेको सूचना पनि मेस्सीले पाएका छन् । यस्तो खबर स्पेनको चर्चित पत्रका ‘मार्सा’लगायत थुप्रै मिडियाले छापेका छन् ।
नेइमार फर्काउने विषयमा क्लबका अध्यक्षले आफूलाई वचन दिएजसरी प्रयास नगरेको कुरा मेस्सीले ड्रेसिङ रुमका अन्य खेलाडीसँग सेयर गरेको खबरमा उल्लेख छ । मिडिया रिपोर्टमा बार्सिलोनाले नेइमारका लागि ठूल्ठूला अफर गरेको खबर चर्चामा आए पनि खासमा बार्सिलोनाले १४० मिलियन युरो आसपासको मात्रै अफर गरेको सूचना मेस्सीसँग पुगेको खबरमा दाबी गरिएको छ ।
क्लबका अध्यक्षले आफूसँग छलफल हुँदा जसरी नेइमारको विषयमा गम्भीर प्रयास नगर्दा मेस्सीले आफू ठगिएको वा आफूसँग ‘चिटिङ’ भएको ठानेका छन् ।
यो बताइन्छ कि, यसअघि बार्सिलोनाले फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान भित्र्याउँदा पनि मेस्सी र लुइस स्वारेजसहितका खेलाडी ग्रीजम्यानभन्दा नेइमारलाई फर्काउनुपर्ने अडानमा थिए ।
प्रकाशित मिति ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०६:१८
बार्सिलोना र एथ्लेटिको बराबरीमा रोकिए : रियल मड्रिडलाई उपाधि जित्ने सुनौलो ढोका खुल्यो